विस्फोटमा मर्ने नागरिक नभए को त ?
आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएको बम विस्फोटबारे सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले शान्ति सुरक्षामा सरकार निरीह देखिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने सरकारले हठ नत्याग्ने र विप्लवले पनि आफ्नो हिंसा नत्याग्ने हो भने त्यसको पीडा सर्वसाधारणले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने भनी प्रश्न गरिन् । उनको प्रश्न थियो, “गृहमन्त्रीले राजधानीमा भएको विष्फोटमा परी मृत्यु भएका ४ जना नेपाली जनता होइनन्, नेपाली नागरिक होइनन् भन्नुभयो । उनीहरु नागरिक होइनन् भने को हुन् ?”
अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘हिजोको द्वन्द्वकालीन समयमा तात्कालीन सरकारले बोल्ने भाषा नै गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेको भन्दै हिजोको सरकारले गरेको काम गलत थियो कि सही ? भनी प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो, “जो मरे पनि के ती नेपाली नागरिक होइनन् ? हिजो मरेका पनि नेपाली नागरिक होइनन् ?”
सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारलाई हठ छोड्न र विप्लवलाई हिंसा छोड्न आग्रह गरे । उनले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वमा बाँचे सत्तामा पुगिन्छ मरे नागरिकता जान्छ भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइबाट समस्या समाधान हुँदैन । गम्भीर बन्नुहोस् । हिजोका आफ्ना दिन सम्झनुहोस् । भोलि नेपालीलाई थप दुःख नदिनुस् । आग्रह गर्दछु ।”
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले बम विस्फोटसँगै राजधानीबासीहरु त्रसित भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न गरे । सांसद लक्ष्मी परियारले मृत्यु भएकाहरु नेपाली होइनन् भने को हुन् ? भनी प्रश्न गरिन् ।
त्यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबारको घटनाबारे जानकारी दिँदै विस्फोटमा मारिएकाहरु ‘नागरिक नभएको’ बताएका थिए । “त्यहाँ कुनै नागरिकको मृत्यु भएको छैन । विप्लव समूहसँग सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुको मृत्यु भएको छ । घाइते भएका पनि अधिकांश यो समूहसँग आवद्ध छन्,” उनले भने ।
गृहमन्त्रीले घटनाको जानकारी भएपछि मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर भएको थियो । सांसदका प्रश्नको जवाफमा पनि मन्त्री थापाले सोही कुरा दोहो-याए । साथै सरकार वार्ताका लागि पनि तयार रहेको बताए ।
बैठकमा विप्लव समूहले गरेको सोमबारको बन्द र गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुबीच सवाल–जवाफ भएको थियो । बन्द र विस्फोटमा मृत्यु भएका व्यक्तिका बारेमा गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले विरोध गरे भने सत्ता पक्षका सांसदले बचाउ गरे ।
बन्दले पारेको प्रभावका बारेमा सांसदहरुबीचको सवालजवाफ रोचक नै बन्यो । सभामुखसँग समय मागेर विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राख्न भन्दा पनि सांसदहरु बन्दको प्रभाव र नागरिक–अनागरिकको विषयमा केन्द्रित भएर घोचपेचमा उत्रिए । सत्तारुढ दलका सांसदहरु खगराज अधिकारी र महेश बस्नेतले बम काण्डमा संलग्न भनी समातिएका र मारिएकाहरु सर्वसाधरण नभएको र अपराधी नै भएको भन्दै गृहमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरे । उनले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध सही भएको र बन्दको जनस्तरबाटै अवज्ञा भएको बताए ।
सांसद बस्नेतपछि आफ्नो धारणा राखेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले वनस्थलीका सबै गाडीहरु कोटेश्वर गएका रहेछन् भनी व्यंग्य गरिन् । त्यसैगरी सांसद पार्वती डिसी चौधरीले आफू बालकोटबाट ५ मिनेटमा संसद भवन पुगेको भन्दै व्यंग्य गरिन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले ‘माननीय सांसदहरुले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा उतापट्टिका माननीयहरुले जवाफ दिनु उचित छ कि छैन ? हामी सभामुखबाटै जवाफ चाहन्छौं’ भनी सत्तापक्षका सांसदको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले राजधानीको बम विस्फोटमा मृत्यु भएका नागरिक सामान्य नागरिक नभएको भन्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले घटनामा मारिने ‘कुन देशका नागरिक हुन् ?’ भनी गृहमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्न गरे ।
‘आतंककारी समूहको माग के हो ?’
आइतबारको शृंखलाबद्ध बम विस्फोटको घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मुख फोरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हिजो बम पड्काउने आतंककारी समूहलाई सोध्न चाहन्छु– माग के हो ?”
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नेपाललाई विकास हुन नदिने तत्वहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको बताए । बम आतंक त्यसैको कडी भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट सरकार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै सोधे, “अब के चाहियो ?,” उनले सिलिण्डर बम हानेर आतंकित पार्ने र लुटपाटका लागि क्रान्तिको नाम लिने यो मानव अधिकारका लागि खतरनाक पक्ष भएको बताए ।
विप्लव समूहको उद्देश्य पैसा उठाउने बाहेक केही पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । नेपाललाई अशान्ततिर लैजाने प्रयासलाई सरकारले रोक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी थियो ।
आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएको विस्फोटमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ
रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री
केही समययता नेकपा विप्लव भन्ने समूहले संविधानको विरुद्ध, राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध उनीहरुले गैरकानुनी, संविधान विरोधी र शान्ति विरोधी गतिविधिहरु गर्दै आएका छन् । उनीहरुले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद् भन्ने संस्था गठन गरेका छन् । जनसेनाको रुपमा उनीहरुले चार कम्पनी निर्माण गरेका छन् यो सबै गतिविधिहरुको नेतृत्व गर्नका निम्ति उनीहरुले नेकपा भन्ने नामको पार्टी पनि गठन गरेका छन् ।
केही समयदेखि, केही वर्षदेखि यता उनीहरुले सशस्त्र गतिविधिहरु, गैरकानुनी गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइराखेका छन् । हामीले यी कुराहरु गत स्थानीय, प्रदेश, संघको निर्वाचनमा पनि उनीहरुको गतिविधिहरु देख्यौं ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध भन्ने नारा अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा एनसेलका टावरहरु र ठाउँठाउँमा विष्फोट गरेका घटनाहरु पनि देख्यौं । अहिले आएर हिजो र आज हामीले यी गतिविधिहरुको निरन्तरता देखिराखेका छौं । र, देशव्यापीहरुमा उनीहरुले आगजनी गर्ने, विष्फोटहरु गर्ने, र मुख्यतः उनीहरुको मूल निशाना अहिले उपत्यका बनेको छ ।
हिजोमात्रै उपत्यकामा ठाउँठाउँमा विष्फोटनहरु भए । यो विष्फोटनबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ र केही घाइते भएका छन्, झण्डै आधा दर्जन घाइते भएका छन् । तर, अहिले जुन मृत्यु भएको छ, त्यहाँ कुनै नागरिकको मृत्यु भएको छैन । यो समूहसँग सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुको मृत्यु भएको छ । जो घाइते भएका छन्, अधिकांश यो समूहसँग सम्बद्ध छन् ।
समाजमा आतंक फैलाउने दुषित मनशाय लिइ काठमाडौं, सर्लाही, मकवानपुर, ललितपुर, झापा, धादिङ, दार्चुला, कास्की, मोरङ, भक्तपुर, स्याङ्जा, रौतहट, बैतडी, तनहुँ जिल्लामा समेत शंकास्पद वस्तु र विष्फोटक पदार्थ राखिएको भेटिएकोमा नेपाली सेनाको समन्वयमा निस्कृय पारी अवस्था सामान्य तुल्याइएको छ ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उक्त समूहका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यि सबै घटनाको सघन अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेकपा विप्लव भनिने उक्त समूहले आह्वान गरेको तथाकथित बन्द र आपराधिक गतिविधिहरुको जनस्तलबाटै खारेज भएको र जनजीवन सामान्य रहेको छ र केही आंशिक प्रभाव शैक्षिक संस्थाहरुमा र लङ रुट (लामो दूरी) का यातायातका साधनहरुमा देखिएको छ ।
यो नेकपा विप्लव भनिने समूहका अहिले भर्खरै घटाइएका (गराइएका) गतिविधिहरु यिनै हुन् । र यो समूहलाई सरकारले राज्यले नियन्त्रण गर्ने, र वार्ताद्वारा, एउटा संवादद्वारा मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेको छ । यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि नै बढिराखेको छ । यो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन र यिनीहरुका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न राज्य प्रतिवद्ध छ ।
एक खर्बभन्दा बढीको निर्यात हुँदैछ : बास्कोटा